NOTAM POLITIKA NO NATAO TETO – MyDago.com aime Madagascar
NOTAM POLITIKA NO NATAO TETO
Mazava hoy Raguy teny amin’ny Magro Behoririka androany fa Notam politika no natao teto izay tsy ao anatin’ny fanekena nosoniavina tao amin’ny ACI. Maza fa manao toe-tsaina jiolahim-boto Rajoelina. Momba ny fanesorana an’i Augustin Andriamananoro dia nambarany fa mazava ny nambaran’ny mpanolontsaina ny filoha fa tsy mifanaraka amin’ny texte izany. Mino sy manantena isika hoy izy fa hisokatra ny radio nakatona. Mila mandresy lahatra isika satria miangavy ny minisitry ny fitsarana isika. Azon’ny filohampirenena atao ny manome baiko hamoaka ireo gadra politika ireo satria raharaham-pirenena. Noho izany dia omeo baiko andriamatoa filoha ireo tomponandraikitra voakasika amin’izany. Andriamatoa Tsianihy dia nilaza fa misy fiantraikany ratsy tena ratsy amin’ny lalàm-panorenana 2010 ny fanonganam-panjakana. Tsy ara-dalàna ny fampidirana am-ponja, ny fanakatonana radio. Vokany hoy izy dia tsy ara-dalàna ny zavatra rehetra natao teto nanomboka tamin’ny fanonganana ny filoha Ravalomanana. Ny anay dia ravao io lalàm-panorenana io. Andriamatoa Ignace dia nanambara fa ny fanendrena mpiasam-panjakana dia toerana politika fa tsy asa. Rehefa tendrena amin’io ny olona iray dia tokony hieritreritra fa rehefa miala ilay olona manendry dia miala ianao. Ankoatra izay dia nilaza Ignace fa tsy miditra amin’ny adin’ny Mapar sy Hvm ny movansa Ravalomanana fa mitazana fotsiny. Rehefa tsy mifanaraka amin’ny filoha lany ianao dia mpanohitra izay. Ny lalàm-panorenana eto amintsika hoy izy dia sady tsy semi-presindentielle no sady tsy semi-parlemantera. Tsy raharahan’ny tantsaha na voatendry na tsia ny Praiminisitra fa ny azy ny olana dia ny tsy fisian’ny fahefa-mividy. Ny antsika dia tsotra ihany, miverina eto I dada na voatendry na tsia ny Praiminisitra. Tsy ny Mapar, ny Hvm, sns hoy Eric no olana eto Madagasikara. Iarahantsika mahalala fa tsy hoe tsy fitaivana olona fa io rafitra mijoro amin’izao io dia miaina amin’ny tsy fidiny, Repoblikan’ny akory atao. Tsy io no olana fa ny olana dia ny fametrahana ny lalàna amin’ny tokony ho izy sy ny fampiharana izany.
Auteur Solo Razafy*Publié le 7 mars 2014 Catégories Politique
13 pensées sur “NOTAM POLITIKA NO NATAO TETO”
Izao ve vao tonga saina @ izany ??? Tena mahagaga sy MAHASOSOSTRA !!!Jean obert RAZAFY koa efa nosolin’ny MAPR , sao tsy fantatrao !!!
TOA MIVOAKA HO AZY DAHOLO ITY NY TSY FAHATONAGAVAN-TSAINA . 🙁
inona marina ilay tiana atao fa raha izao ttraina eto izao ve tsy efa fantatry ny olona e?
Aoka haseho ny vahoaka fa i Rajoelina no olana mahazo anao re RajaoXYZ a!
Efa fantatra izao fa i Rajoelina no tianao ho atao PM, fa mbola mihahotra NY AMPISEHO AZY AMIN4NY VAHOAKA IANAO.
Ny olana mantsy dia METY ho fifanarahanareo sy Rajoelina ny hoe : Atao PM izy mandra-pahatonga ny 2018, ary avy eo dia HISEHO HO CANDIDAT @ PREZIDANSIELINA 2018. Amin’izay dia ho mora aminareo ny hanakana ny fodian’i Marc Ra8 mandra-pahatonga ny 2023. Izany hoe efa tsy ho afaka ny hiditra ho Candidat INTSONY Ra8.
Efa azo lazaina fa mitohy izao ny HAT-Rajoelina na mody misy fiovàna miseho aza : Anareo no mandinka ny ho avin’ny vahoaka MIJALY, amin’ny adinareo .
8 mars 2014 à 12 h 46 min
Na mody Ra8, na tsy mody : ianareo izao no Tompon’andraikitra ny ho avin’ny vahoaka sy Mkara.
Raha i Rajoelina no ho PM, dia tsy hisy zavatra ho vanona akory , fa dia aleo ny vahoaka ho lazaina fa hiankina TANTERAKA @ Vozongo : ka Ho tena zanatany.
Na efa fantatry ny olona, na zavatra tsy dia mitombona fa resaka be fotsiny. Tsy mahagaga raha vaky ny lohan’ny vahoaka !
Mba eritrereto tsara ihany ry zalahy izay ho tenenina, fa indraindray tena mampiomehy be â !
« Andriamatoa Ignace dia nanamba fa ny fanendrena mpiasam-panjakàna dia toerana politika fa tsy asa » !
Dia gaga amin’izany aho ! Ny fanomezana asa ho an’ny mpitsabo, ny injeniera amin’ny fambolena ets… izany dia resaka politika ? Shh… Fa inona izany resaka izany ê ?
Minisitra na sekretera jeneralin’na ministera, dia mbola azo lazaina fa misy resaka politika ; fa ny tale jeneralin’ny ministera dia tokony ny traikefa amin’ny maha teknisianina an’ilay olona no jerena !
Ary io anisan’ny naha tezitra ny be fialonana tamin’ny andron’i Ravalomanana satria ny CV no tena nojereny, fa tsy fanaovana kaomiberaka tahaky ny fanaon’ny sasany.
Dia mba inona no mba eritreritr’ireo olona mihaino anareo ireo ? Tsy mahazo asa avy amin’ny fanjakàna raha tsy manohana ara-pôlitika ?
Maninona rahatoa ka ny tsy maha-ara-dalàna ny Mapar no azavaina amin’ny vahoaka ?
Andron’ny Vehivavy hono ity faran’ny erinandro ity ! Koa miarahaba sy mankahery an’ireo Vehivavy tia tanindrazana ny tenako !
Ny sasany moa izany dia ireo vehivavy any am-panjo no tena nomena laharam-pahameana, fa ireo vehivavy miady amin’ny fiainana isan’andro ary vokatry ny fanonganam-panjakàna tsy nasiana sira !
Hoy ilay olona iray izay, « Tiany mba ho hita kosa angamba hoe, manao ahoana izany any izany, sao dia alefan-dry zalahy any indray andro any » !!!
tsy nahazo bezoro izany i kala Mialy ve ???????????
sambory ilay dj, dia tapaho ny lohany, raofy amin’ny gona ny foza rehetra dia dory.inona ihany no andrasana sa fomba malagasy ilay mikabary ?
8 mars 2014 à 20 h 10 min
Toa tsy ho afaka ny hisambotra an’i DJ akory ity izy koa !
Ny Depiote Foza midongy toerana fa be saosy nefa tsy misy fahaizana ana ny 1 aza !
Vakio anie ny ato e !
« Contre-visite ! »
Voafidy soamantsara ireo depiote mandrafitra ny Antenimieram-pirenena ary efa nandray ny asany. Saingy izao no olana tamin’ity indray mitoraka ity: maro amin’ireo depiote no manana fahasahiranana ara-taratasy, mba tsy hilazana hoe analfabeta. Olona toa izany anefa no handrafitra sy hamolavola lalàna.
«Kivy mitsy ela letsy ry Jeannot refa mitazana ‘reto mba depite-tsika ‘reto. Mivandravandra eny amin’ny tavan’ny sasany ny habadoany ; ny hafa indray de itan’la ‘zao mitsy hoe nosesefana pile Alcaline ampitenenana an’zao retra ‘zao fotsiny. Raha mba misy « contre-visite » ôtran’ny amin’ny fiara atao amin’reto depiten’la ‘reto ry Jeannot, ngamba horaofina amin’ny sobika ny henatra sy ny fahafaham-baraka». « Oadray ! Refa te hivanitika ela de mandehana eny Tsimbazaza mijery karazana fomba fiakanjo. Ny sasan’zany mihoatra lavitra noho i Michael Jackson eny ambony sehatra; ny hafa ‘ndray sahala amin’ny nde hamonjy carnaval. Hitan’la eny an-kodiny avokoa ny loko rehetra misy eto ambonin’ny tany. ‘Zany nge letsy ry Zistà d’efa ampy hitarafana zavatra betsaka e!”.
Tena mendrika ny ho mpanao lalàna tokoa ve ireto solombavambahoaka ireto ary tena mahafantatra ny andraikiny avy? Fanamboarana tetezana sy lalana mantsy no fampanantenana nataon’ny sasany ireo vahoaka mpifidy azy nandritra ny propagandy. Raha mba azo natao « contre-visite » sahala amin’ny fitsarana fiarakodia tokoa mantsy izy ireo, nanilihana ireo tsy mahafeno ny fepetra takiana amin’izany andraikitra goavana izany, isangy indrisy !
Izao no foza tokony ho dorana ary atsipy any anaty fako nefa dia mitan-toerana ao !
8 mars 2014 à 20 h 58 min
I Rajoelina no nametraka ireo tao mba hanabe isa ny Mpifidy azy !
Ka anjaranao Ra- Hery ny mandinika sy mamolavola raha tena tokony Hiala tao i Ra-Krisy na tsia.
Saiky adino ny Filazana fa ny Trano manakaiky ny Assemblée Nasionaly, tsy izay maha-trano azy intsony, fa FANGEREN’NY ALIKA SISA .
Mbola hisy Fisalasalàna ihany ve ny Handà an’i TGV ho PM ?!!!
Arosoy re i « Jules » dia ho hita eo ny vokany e ! i Resampa : fadio ihany koa !
Tady atsipy an-tandrok’omby io Rainy a ! 😮
comment on « FABRIQUE » des présidents de la françafrique
Le putschiste COURT TOUJOURS
Tant qu’on laisse courrir un putschiste , c’est qu’on a rien dans la culotte !
9 mars 2014 à 8 h 59 min
ny fisamborana an’ing DJ dia tsy mbola izao,fa miandry kely fa ho tonga @zany isika f’aza matahotra.
Mbola ho ela toy ny fanolorana ny PM koa izany ny Fisamborana ilay NISOLOKY ho Prezidan’ny Repoblika atao hoe Rajoelina ?
Manome PM aza efa hjo lany ny herintaona ka ny fisamborana sy ny fandrosoana @ Tiana atao ho an’ny Tanidrzana izany tsy ho 50 na 100 taona vao ho tonga ? Hery Vaovao tokoa ka !
Asiana mandia kely aloha ny babakoto isan-karazany.
Nisy teny izay nataon’i GBD IZAY:….. Sao kosa foza miafina ianao io Randrianiaina ???
Mba lazao sy valio re rehefa misy fanontaniana mazava azafady e !
Ilay politikan’i Ra8 ( izay nataonao hoe: tsy lazaina aloha izao 😉 ) , aza tenenina intsony fa avelao hihesona ao koa e :
Ireo miaramila lazainao hoe : fantantsika ny misy azy : mba aiza moa izy ireo izao ???
Lasa any Tsiafahy angaha, sa…..MBOLA MIANDRY KELY ?
Marina aloha fa Antananarivo tsy vitan’ny indray andro e ! nefa na izany aza, EFA BE NY FAMPIHESONANA (dimy taona).
Aveal hijaly kely ihany aloha ny gasy izao Aloha ??? fa aoriana kely ao no …..
Précédent Article précédent : NANDRESY ISIKA SATRIA NIALA IREO OLONA NAMPIJALY ANTSIKA
Suivant Article suivant : VEHIVAVY MOVANSA RAVALOMANANA : AINA SY FITIAVANA NY FANOMEZAN-DRA